कुडा नगर कर्णालीका: नरबहादुर कार्की – Karnalisandesh
कुडा नगर कर्णालीका: नरबहादुर कार्की
प्रकाशित मितिः २२ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १४:२९ March 5, 2020
मानव विकासको पुछारमा कर्णाली, पुर्वाधारको पुछारमा कर्णाली, शिक्षा स्वास्थ्यमा परनिर्भर कर्णाली, सामाजिक विभेद र अवसरको अभावमा कर्णाली, सबैभन्दा छोटो आयुबाँच्ने कर्णाली, गणतन्त्रको लागि सबैभन्दा ठुलो बलिदान गर्ने कर्णाली, खाद्य संकटको जोखिम व्यहोर्ने कर्णाली, अनि आधुनिक नेपाललाई एउटा भाषा र सभ्यता दिने कर्णाली। कहाँ छ?
सरकारी लुम्बिनिकरण र केन्द्रिकरण प्रष्टै देखिन्छ। झापामा खर्ब बजेट, पोखरा, लुम्बिनी, काठमाडौँ अनि निजगढ तीनसय किलो मिटर भित्र ४ वटा अन्तरर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, चितवन बुटवल आठ लेन सडक, उब्जनी हुने बाँके बर्दिया पनि ५ तिर गाभेर, भेरीको पानी तानेर उता, अनि गेम चेन्जर आयोजना उता। हजारका कुरा छोडौ, कती सयलाई रोजगारी सिर्जना भयो कर्णालीमा ? गढ्वालमा गएर हेर्नुपर्छ कर्णालीका मान्छे जग्गा भाडामा लिएर उतै तरकारी खेती गरेका छन्।
लुम्बिनीमा पाँच हजार अटने सभा हल, चितवनको सरकारी जग्गा दिएर रङशाला, रेल चलाऊने छैन, सुरुङ बनाउने छैन, आँफै बनाउने हाइड्रो छैन। उब्जनी र खानी छैन। गणतन्त्रले ल्यायो चाँही के? कर्णालीले कुडा बाहेक अर्को के आश्चर्य देख्दै छ? यता कर्णालीमा के देउडा गाएर बस्ने? कि वीरेन्द्रनगरमा जग्गाको भाउ बढेपछि कर्णाली जुरुक्कै उठछ? दाताको लगानी सबै ५ नम्बर किन सर्यो? गरिब मधेश, कर्णाली र सुदुरमा छ। तर दाताहरु किन ५ मा पुरै ध्यान दिदै छन? किनकी एमसीसीको ध्यान प्रदेश नम्बर ५ मा छ।
यती ठूलो हौवा गरेको एमसीसीको ५५ अर्बले कर्णालीको गरिवीलाई किन लक्षित बनाएन? अस्पततल र स्कुल बनाउन किन चाहेन? किन कि त्यताबाट रणनीतिक दवाब बनाउन कठिन भएको र बेसहरु असुरक्षित हुने भएकाले त्यहाको आवश्यकताले उसलाई छोएन। अर्को कुरा धार्मिक र साँस्कृतिक अतिक्रमणको हिसाबले कर्णालीको समाज सजिलै संक्रमित नहुने देखेका छन्।
तीन हप्ता जति भो हेरिरहेको छु। कुडा के के भए? निश्कर्ष के भए कुन्नि ? १४ करोड गोजिमा बोकेका प्रदेश माननीय सप्पै आफ्नै पार्टीका भएपछी तै चुप मै चुप हुने होला। संघिय माननीयका वार्षिक छ करोड पनि मान्छेका मुख बन्द गर्न काफी नै हुनुपर्छ। तर कर्णालीको रुपान्तरण एउटा ’कुडाको अन्त्यहिन श्रीखंला’ बनिनै रहने छ। नकुडा गर कर्णालीका, यो नयाँ तख्ती लगाइएको सिंहदरवारभित्र फेरि पनि कर्णाली पुरानै पिडा उही रहेको छ।